Xaalka Qudus: Dibadbaxyo & rabshado dhacay Jimcihii maanta – Kasmo Newspaper
Xaalka Qudus: Dibadbaxyo & rabshado dhacay Jimcihii maanta
Updated - December 8, 2017 9:12 pm GMT
London (Kasmo), Tobaneeyo qofood ayaa ku dhaawacantay weerar diyaaradaha dagaalka Israel ku qaadeen maanta 2 bartilmaameed oo ku yaalla Woqooyiga marinka Gaza, ka dib markii 2 gantaal lagu soo tuuray dhanka Israel.
Mid ka mid ah 2da bartilmaameed ee la duqeeyay wuxuu noqday Xarun tababar oo uu leeyahay Ezzadin Al-Qassem, garabka hubaysan ee Ururka Xamaas oo ku dhow Xerada Qaxootiga Jabaliya. Qaraxyo kale ayaa waxaa laga maqlay goobta kale ee ku dhow Sheikh Zayed.
Xaaladda uud ee Daanta Galbeed ayaa ka sii dartay, ururka Bisha Cas ee Falastiinna wuxuu sheegayaa geerida 1 qof iyo dhaawaca 767 qofood oo 61 ka mid ah qabaan nabarro rasaasta cinjirka ka samaysan.
Dhinaca Gaza, tirada dhaawaca waxaa lagu sheegay 15 qofood, Madaxa Xafiiska Siyaasadda Xamaas, Ismaciil Haniyeh oo hadlayna wuxuu yiri: “ Trump iyo cid kale toona ma beddeli karto taariikhda iyo haybta magaalada Qudus”.
Dhanka New York, Safiirrada 5 dal oo reer Galbeed ah (Italy, France, Britain, Germany iyo Sweden) ayaa qoraal wadajir ah oo lagu dhaleecaynayo go’aankii Trump ka akhriyay Qarammada Midoobay, dhammaadkii kulan Golaha Ammaanka ay ka codasadeen iyaga iyo 3 dal oo kale oo ka mid ah 15ka xubnood ee Golaha Ammaanka.
Dibadbaxyo lixaad leh ayaa ka dhacay magaalooyinka Qaahira, Istanbul, Jakarta, Kuala Lumpur, Tunisi, Beirut, Lahore, Teheran, Muqdisho, Dakka ilaa Srinagar, waxaana la gubay calammada USA iyo Israel. Nabadgalyada Xarumaha Dibolomaasi ee Maraykanka ku leeyahay meelaha qaarkood dunida ayaa la xoojiyay.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda, Rex Tillerson, oo ka hadlaya shir jaraa’id oo Paris looga hadlayo arrimaha Lubnan ayaa yiri: “Wareejinta Safaaradda Maraykanka dhanka Qudus waxay qaadan kartaa muddo 2 sano ah”.
Tillerson wuxuu hoosta ka xarriiqay in maqaamka ugu dambeeya ee Qudus lagu qeexi doono wadahadallada u dhexeyn doona Falastiin iyo Israel.
Brexit: Qodobbadii sharciga ahaa ee kalaguurka oo laga heshiiyay
Falastiin: guryaha Israel dumisay tan iyo 1967kii (Warbixinta Land Research Centre)
Russiya: Doorashadii Madaxweynaha cusub oo loo dareeray saaka
UK/Russia: Moskow oo markeeda cayrisay 23 Dibolomaasi oo British ah
Abwaan Sugaal cabdulle: War Miyeynaan arkayn 2014